Inona no mety fantsona vy Mallebale?
Inona no fantsom-by vy Mallebale fantsom-by vita amin'ny vy malemy mora kokoa ao amin'ny kilasy 150 # sy 300 # fanerena. Natao ho an'ny indostrialy maivana sy ny fampiasana plumbing hatramin'ny 300 psi izy ireo. Ny fantsom-by vy malemy, izay antsoina koa hoe fittings vy mainty, azo alaina amin'ny fantsona fantsom-bidy 6 santimetatra, ...
LEYONSTEEL Ductile Iron Pipa, fizarana LEYONSTEEL Cast Iron Pipo Company, dia mpamokatra fantsom-by vy vita amin'ny ductile ho an'ny indostrian'ny rano. LEYONSTEEL Fantsona Ductile Iron manome: High-Impact Resistance LEYONSTEEL Ductile Iron Pip dia manana tanjaka sy fihenjanana mavesatra ...
Ny fantsona vy malemy azo alaina leyon fitouri dia mpamatsy manerana an'izao tontolo izao
Ny vy vy sy fantsom-bary vita maloto dia ampiasaina amin'ny rafi-pipa mba hampifandraisana ireo faritra fantsona na fantsom-baravarana, mampifanaraka amin'ny habe na endriny samy hafa ary ho an'ny tanjona hafa, toy ny fandrindrana (na fandrefesana ny fikorianan'ny tsiranoka). Ny "plumbing" dia ampiasaina amin'ny famaritana ny fihanaky ny rano, ny entona, na ny zava-pisotro ...